शरणार्थीका लागि शीर्ष दस जब: खाना सेवा | USAHello | USAHello
खाना सेवामा काम कसरी प्राप्त गर्न पत्ता
खाना सेवा खानपान उद्योग रूपमा भनिन्छ, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय वा मनोरञ्जन. थप 14 लाख मान्छे खाना सेवा उद्योग मा काम, र सबै भन्दा जब अन्य कारोबार भन्दा प्राप्त गर्न सजिलो छन्. खाना सेवा उद्योग किनभने अमेरिका बढ्दै छ परिवार र साथीहरूसँग खान बाहिर जा आनन्द.
यहाँ खाना सेवा उद्योग मा विचार गर्न केही जब र करियर हो:
खाद्य सेवा सहायक
खाना सेवा सहायक तयार र स्थानहरू सबै प्रकार मा ग्राहकहरु खाना र पेय सेवा, महंगा रेस्टुरेन्टमा कफी पसल बाट. तिनीहरूले पनि बिल मद्दत र भान्सा सफा र सुग्घर राख्न छ.
रेस्टुरा कुक क्याफे वा सानो रेस्टुरेन्ट मा तयार गर्ने कसैले र पकाएको भोजन छ. तिनीहरूले सबै के, सामाग्री खरीद पूर्ण भोजन पकाउन गर्न. ठूलो रेस्टुरेन्ट मा, तिनीहरूले सबैभन्दा अनुभवी शेफ फल र तरकारी र अन्य धेरै कार्यहरू तयार गर्न मद्दत.
तपाईं रेस्टुरा महाराज रूपमा पेसा बारेमा थप जान्न सक्छन् एक भिडियो हेर्न
वेट्रेस वा वेटर (पनि भनिन्छ सर्भर)
टेबल प्रतीक्षा काम मेनु वर्णन छ, आदेश लिएर र खाना सेवा. जसले सार्वजनिक सामना मनपर्यो एक बहिर्गमन व्यक्तित्व कसैले लागि राम्रो काम हो. संयुक्त राज्य अमेरिका मा, आफ्नो पेरोल बाहेक इत्तला दियो सर्भर.
एक कसाई पसलहरूमा र रेस्टुरेन्ट लागि पेशेवर मासु कटौती. कसाई तयार, मूल्य र प्रदर्शनीका राख्नु मासु. तिनीहरूले ध्यान र तिनीहरूले सामना कार्यहरू नजिक ध्यान गर्न सक्षम हुनुपर्छ.
“सेफ” यसलाई प्रशिक्षित एक पेशेवर महाराज लागि अर्को नाम हो. को शेफ व्यञ्जनहरु पालना र खाना पकाउने आपूर्ति ट्रयाक राख्न विस्तार गर्न उत्कृष्ट ध्यान हुनुपर्छ. केही शेफ सस या ग्रील्ड विशेषज्ञ. आँटा शेफ केक र मिठाईहरू विशेषज्ञ. एक Sous महाराज धेरै कार्यहरू संग कार्यकारी महाराज र मदत निर्देशन अन्तर्गत काम गर्ने हुन्छ.
होस्ट वा acomodador
एक होस्ट वा acomodador आरक्षण ह्याण्डल र आफ्नो टेबल गेष्ट स्वागत, तिनीहरूलाई मेनु दिन्छ र साधारण तिनीहरूलाई सहज महसुस. होस्ट वा acomodador काम प्रारम्भिक स्तर को काम छ, र हाकिमहरूले ठूलो अनुभव संग एक व्यक्ति भन्दा एउटा अनुकूल र विश्वसनीय व्यक्ति खोज्न.
रेस्टुरा प्रबन्धक सम्पूर्ण रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापन र सबै सजिलै चल्छ भन्ने निश्चित बनाउँछ जो कसैले छ. कर्मचारी निरीक्षण, आपूर्ति अनुरोध, कहिले काँही उनि ग्राहकहरु र ह्याण्डल मार्केटिङ र वित्त सामना.
यो भिडियो मा एक रेस्टुरेन्टको सामान्य प्रबन्धकको काम बारे थप पत्ता
सिक्न बारेमा खाना सेवामा जब थप
खाना सेवा मेरो लागि सही काम छ?
खाना सेवामा काम तपाईं पूरा र विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरू अन्तरक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ. काम व्यस्त हुन सक्छ, कहिलेकाहीं, र केही ग्राहकहरु ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुन सक्छ. दबाब र सकारात्मक मनोवृत्ति अन्तर्गत शान्त रहन छन् यो दौड मा मान्छे को लागि राम्रो गुण. धेरै खाना सेवा जब तपाईं आफ्नो काम तालिका र विद्यालय यसलाई संयोजन गर्न सक्छन् लचिलो कार्यक्रम प्रस्ताव, परिवार र अन्य गतिविधिहरु.
careeronestop.org मा स्व-आकलन परीक्षण प्रदर्शन
FEATURE बक्स: खाना सेवा भविष्य: तपाईंको आफ्नै मालिक हुन!
तपाईं चाहनुहुन्छ खाना सेवामा काम र आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न? तपाईं एक विशेषता खाना छन् – मूल को आफ्नो देश देखि सायद परम्परागत खाना?
खाद्य ट्रक भनेर खाना पकाउन र खाना सेवा गर्न अनुमति मोबाइल भान्सा छन्. खाद्य ट्रक ताजा खाना पकाएको सेवा, अक्सर एक जातीय विषय संग- मूल को आफ्नो देश देखि खाना अमेरिका लागि नयाँ र रोचक हुन सक्छ. हरेक वर्ष, यो राष्ट्रव्यापी खाना ट्रक संख्या बढ्छ. तिनीहरूले रेस्टुरेन्टमा वैकल्पिक रूपमा धेरै लोकप्रिय छन्. तपाईं राम्रो कुक वा थाहा छ भने जो स्वादिष्ट भोजन Cooks, यो विचार सहयोग गर्न महान हुनेछ. एक खाद्य ट्रक पनि राम्रो परिवार व्यापार हुन सक्छ.
पढ्न incubadora डे स्पाइस भान्सा: खाना ट्रक उद्यमीहरू हुन शरणार्थी सक्षम
यस लेखमा एक खाना ट्रक व्यवसाय कसरी सुरु गर्न बताउँछ.https://www.moneycrashers.com/how-to-start-food-truck-business-plan/
(पृष्ठको RCO लिङ्क) तपाईंको आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न कसरी?
अधिकांश मानिसहरू खाना सेवामा अनुभव हासिल, विशेष गरी रेस्टुरेन्ट मा, तल बाट सुरु र बिस्तारै उक्लनुभन्दा. राम्रो खाना सेवा तपाईं प्रशिक्षण वा अनुभव बिना धेरै जब प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने छ. त्यसैले, तपाईं तुरुन्तै काम गर्न आवश्यक छ भने, सामान्यतया त्यहाँ उद्योग मा अकुशल कर्मचारीहरूको लागि मांग छ किनभने यो राम्रो विकल्प छ. तर यदि तपाईं खाना पकाउनु प्रेम, वा नेतृत्व स्थिति कब्जा गर्न चाहनुहुन्छ, पहिलो केही प्रमाणपत्र वा अनुभव प्राप्त गर्न आवश्यक.
प्रवेश स्तर जब लागि, सहायक खाना सेवा, रेडियोबिना र सेवा डेस्क, कुनै प्रशिक्षण विशेष आवश्यक छ, तर उच्च विद्यालय उपाधि तपाईं काम प्राप्त गर्न सक्छन्. सबैभन्दा हाकिमहरूले नयाँ कर्मचारीहरु लाई काम प्रशिक्षण दिन.
यस शरणार्थी केन्द्र अनलाइन मुक्त अनलाइन कक्षाहरू - एक उच्च विद्यालय उपाधि प्राप्त गर्न अध्ययन
जबकि केही सारा महाराज र रेस्टुरेन्ट शेफ पकाउने कला प्रशिक्षण प्राप्त गरेका छौं, अरूलाई आफ्नो अनुभव रेस्टुरेन्ट मा काम प्राप्त. प्रवेश-स्तर स्थान धेरै सुरु गर्न र सीढी अप सार्न कठिन काम.
तपाईं रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापनमा रुचि छ भने, तपाईंले केही प्रमाणहरू आवश्यक हुनेछ. त्यहाँ दुई वर्ष को एक अवधि धेरै पाठ्यक्रम प्रशासन र व्यवस्थापन उपलब्ध छन्.
खाना सेवा उद्योग मा योग्यता बारेमा थप जान्न
- यो पृष्ठ सूचीकृत तीन उपयोगी स्रोतहरू समीक्षा
त्यहाँ रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सिक्न धेरै अनलाइन अवसर हो. अनलाइन विद्यालय तपाईं आफ्नो संचार सीप विकास र रेस्टुरा प्रबन्ध सिक्न मदत गर्नेछ. उदाहरणका लागि, Coursera धेरै अनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान गर्दछ:
धेरै सामुदायिक कलेजहरु पाक सस्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम संचार र अंग्रेजी कौशल सुधार शरणार्थी र आप्रवासी प्रस्ताव र सहयोग.
एक समुदाय कलेज फेला, तपाईं नजिकै.
पाक विद्यालय शेफ र अन्य खाद्य सेवा करियर लागि प्रशिक्षण प्रदान. यहाँ एक पकाउने कला प्रशिक्षण विद्यालयहरूको अनलाइन निर्देशिका
काम कोरयसलाई जवान पुरुष र महिला निःशुल्क शिक्षा र तालिम प्रदान, उमेर 16 एक 24 वर्षको. जाँच आफ्नो कार्यक्रम पाक कला.
तपाईं अर्को देशमा एक योग्यता वा प्रमाण खाना सेवा छ भने, Upwardly विश्व आप्रवासी मद्दत गर्छ, शरणार्थी, asylees र भिषा विशेष आप्रवासी को धारकों काम गर्ने अधिकार (SIVs) संयुक्त राज्य अमेरिका मा आफ्नो करियर पुनः सुरु गर्न.
आवश्यक अंग्रेजी सिक्न?
आवश्यकएक अमेरिकी नागरिक बन्न?
आफ्नो काम खोजी सुरु. यहाँ केही विकल्पहरू छन्:
आफ्नो स्थानीय रोजगार केन्द्र प्रयोग: प्रत्येक शहर सरकार मा रोजगार केन्द्र मुक्त छन्. सल्लाह त्यहाँ प्रस्ताव र स्थानीय जब सूची कायम. तिनीहरूले रिजुमेहरू र काम आवेदन मद्दत. तिनीहरूले काम खाना सेवाको लागि प्रशिक्षण र शिक्षा तपाईं जडान गर्न सक्नुहुन्छ. फेला आफ्नो निकटतम रोजगार.
इन्टरनेटमा खोजी: com मद्दत मान्छे पाउन प्रति घण्टा जब काम साइट हो. यहाँ तपाईंको हो खाना र रेस्टुरेन्ट मा जब को वर्तमान सूची.
आफ्नो रिजुम अद्यावधिक: सुझाव एक उत्कृष्ट रिजुम विकास गर्न
तपाईंको साक्षात्कार लागि अभ्यास कसरी अर्को काम साक्षात्कार मा सफल